Cabdiraxmaan Shiikh Mahdi “ONLF kama ka tanaasuli doonto gobanimo udirirkii Soomaali Galbee” – Radio Daljir
Diseenbar 8, 2018 8:20 b 0
Qaar kamid ah madaxda Ururka ONLF ayaa sheegay in aysan marnaba ka tanaasuli doonin gobanimo u dirirkii dhulka ay dagaan Soomaalida Itoobiya.
Waxa ay sheegeen in hadafka Jamhada marnaba uusan sidii hore iskabadali doonin.
Cabdiraxmaan Shiikh Mahdi oo kamid ah madaxda Jabhada ONLF ayaa sheegay in markii hore Itoobiya ay bilowday dagaalka ay Jamhada lagashay .
Waxa uu sheegay in ay sii xoojin doonaan dadaalada ay gobanimada ugu raadinayaan Soomaali Galbeed , rajo weyna ay ka qabaan in ay ku guulaystaan .
Dahawaan ayay markii magaalada Jigjiga ay ka soo dageen in kabadan 200 oo askari oo ka tirsanaa Jamhada ONLF kuwas oo ladajiyay kuliyada tababarka ciidamada ee magaalada Jigjiga .